साताको ब्लगर: वसन्त गिरी - MeroReport
साताको ब्लगर: वसन्त गिरी
मौरीघाट, देउखुरी, दाङ घर भएका वसन्त गिरी हाल अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिकाको वायोमिङमा बसोबास गर्दै आएका छन । उनी रसायनशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्दै छन ।
आफ्नो परिवारमा बुबा, आमा, श्रीमती र दिदी, बहिनीसँग बस्दै आएका वसन्त विभिन्न ठाँउको भ्रमण गर्न रुचाउँछन । विगत केही बर्ष देखि फोटोग्राफीमा पनि चाख लागेको उनी बताउँछन ।
मनको बह पोख्ने माध्यमको रुपमा ब्लगिङ गर्न सुरु गरेका वसन्त समय, परिस्थिति हेरेर विभिन्न विषयवस्तुमा ब्लगिङ गर्ने गरेका छन । ब्लगिङ गर्न निकै रुचाउने वसन्तलाई हामीले यसपालीको साताको ब्लगरको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौँ :
अब हामी ब्लगिङ कै कुरा गरौँ । कहिलेदेखि ब्लगिङ गर्न सुरु गर्नुभयो ?
मैले ब्लग सुरु गरेको करिब पाँच वर्ष हुन लाग्यो। सन २००७ को जुलाई महिनाको अन्त्य तिर पहिलो पोस्ट गरेको रहेछु।
तपाईंले ब्लगिङ नै किन रोज्नु भयो ?
मैले ब्लग सुरु गर्दाताका यसको निकै बाढी नै आएको थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई । मेरो साथी नबिनले जानकारी गराएपछि म पनि ब्लगिङ संसारमा पसेको हुँ । सित्तैमा आफ्नो मनको कुरा, विचार अरुलाई बाँड्न पाउने भएपछि किन नगर्ने भनेर ब्लगिङ गर्न थालेँ ।
ब्लगमा कस्ता कुराहरु लेख्नुहुन्छ ?
यस्तै कुरा मात्रै लेख्ने भनेर सिमा कोरेको त छैन । जुनसुकै विषयबस्तुले पनि स्थान पाउछन्, समय परिस्थिति हेरेर ।
अहिलेसम्म आफूले पोस्ट गरेका विषयवस्तुको बारेमा बताइदिनुस न ?
अहिले सम्म पोस्ट भएका २६२ पोस्टहरूमध्ये मैले धेरैजसो अमेरिकाका विभिन्न स्थानहरूको यात्रा बिवरण छन्, केही पोस्ट नेपाल घुम्दाका पनि छन्। अनि विभिन्न विषयमा आफूलाई लागेको विचार ब्यक्त गरेका पोस्टहरू छन् । त्यसैगरी कतिपय पोस्टहरू वातावरणीय समस्या र बिज्ञान प्रविधि सम्बन्धी छन् ।
कति समय दिनुहुन्छ ब्लगिङमा ?
हप्ताको कम्तिमा एउटा पोस्ट गर्ने प्रयास गर्छु। त्यसकोलागि केही घन्टा त लागिहाल्छ।
कस्तो प्रतिकिया पाउने गर्नु भएको छ ब्लगबाट ?
पाठक प्रतिक्रियाहरू उत्साह बढाउने खालका र पोस्ट मन पराइदिएका बढी हुनेगर्छन्।
ब्लगिङ गर्दा कुनै रमाइलो अनुभव छन ?
बेलाबेलामा भैरने भर्चुवल ब्लगिङ भेलामा भाग लिँदा त्यहाँ व्यक्त हुने विभिन्न विचारले रमाइलो लाग्ने गर्छ।
आफूलाई मनपरेको र अरुले पनि मनपराइ दिनुभएको कुनै ब्लग पोस्ट छन् ?
मलाइ मनपरेका पोस्टहरू मध्येको एउटा हो “अमेरिकाको सबैभन्दा गहिरो लेकको यात्रा र मेरो ढाका टोपी” यो पोस्टमा धेरै प्रतिक्रिया पनि आएका छन्।
त्यसैगरी पाठकले धेरै पढिएका मध्ये मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहेको एउटा हो “अम्रिका बस्दाका केही रोचक प्रसँगहरु” जसमा मैले अमेरिकामा बस्दा नेपाल सम्बन्धि केही विषयबस्तुलाई रोचक ढंगले वर्णन गरेको छु ।
अन्त्यमा यो यहाँ छुटाउनै नहुने एउटा अर्को पोस्ट छ “Brought Diarrhea From Nepal” यो पोस्टलाई आधार मानेर एकजना क्यानडामा नर्सिङमा स्नतकोत्तर अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो कोर्सकोलागि प्रस्तुति दिनुभएको जानकारी गराउनुभएको थियो। निकै खुशीलाग्यो।
नेपालमा वातावरण र बिज्ञान सम्बन्धी कतिको जानकारी छ कस्तो लाग्छ ?
नेपालमा बिज्ञान र वातावरण प्रति राज्यको ध्यान गएको छैन। यो कुनै प्राथमिकतामा परेको छैन्। तर पनि आम मानिसहरुमा एउटा के धारण विद्यमान छ भने, बिज्ञान पढ्यो भने रोजगार पाउन सजिलो छ, त्यसैले पनि सक्नेहरू बिज्ञान नै पढ्न खोज्छन्। यो अत्यन्तै सकारात्मक हो।
त्यस्तैगरी वातावरण पढ्नेहरू पनि बढ्दै छन्। बिग्रँदो वातावरण प्रति पनि निकै चासो पाईन्छ जनसधारणको तर सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको जस्तो लाग्दैन।
अहिले नेपाल र विश्वमा ब्लगिङको कस्तो ट्रेन्ड रहेको छ ? यसको प्रयोग, प्रयोगकर्ता र प्रभावकारिता ?
ब्लगिङको इतिहास धेरै लामो छैन । करिब १५ बर्षको अवधिमा अहिले करोडौ ब्लगहरु संचालनमा छन्। सुरुमा अनलाइन डायरीको रुपमा सुरु भए पनि अहिले मुलधारको समाचार, विचारको स्रोतदेखि राजनैतिक क्याम्पेनको लागि समेत महत्वपूर्ण हुँदै गएका छन्। त्यसले पनि ब्लगको प्रभावकारिता देखाउछ।
नेपालमा पनि बिगत केहि वर्ष यता (इन्टरनेटको पहुँच विधीसंगै) ब्लग लेख्ने, प्रयोग गर्ने र त्यसको प्रभाब पनि बढ्दै गएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। अन्य सामाजिक संजाल जस्तै ब्लग पनि सामाजिक र राजनैतिक आन्दोलनको सहयोगी बन्न सक्ने देखिन्छ ।
के ब्लगिङले समाजमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ?
पक्कै पनि ब्लगिङले समाजमा जनचेतना जगाउनेदेखि समाजमा प्रभाव पार्ने अन्य कृयाकलाप सहयोगी हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो केही हदसम्म देखिएको पनि छ।
तपाईंको science to society ब्लगको बारेमा केहि भनिदिनुस न ?
अघिल्ला प्रश्नको उत्तरमा भने जस्तै मैले यो ब्लग मनको बह पोख्ने अनलाइन डायरीको रुपमा सुरु गरेको हुँ । र अहिले पनि त्यसैको रुपमा चलिरहेको छ। म साइन्सको विद्यार्थी भए पनि मलाई के लाग्छ भने न त साइन्स नै समाजबाट छुट्टिन सक्छ न त म नै । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मेरो ब्लगको नाम यस्तो राखेको हुँ । कहिलेकाहीँ यो नाम परिवर्तन गरेर एउटै शब्दको जिब्रोमा झुन्डिने नाम राख्न पनि सोचेको हो, तर अहिलेसम्म त्यो भएको छैन।
नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा पोस्टहरु लेख्ने गरेको छु। कुनै कुरा नेपालीमा र अन्य अंग्रेजीमा ब्यक्त गर्न सजिलो हुने हुँदा यसो गरेको हो। फेरी कुनै पोस्टका टार्गेट पाठक अंग्रेजी पढ्ने र कुनैका नेपाली पढ्ने हुन्छन । दिनको करिब १०० पटक मेरो ब्लग हेरिन्छ। रमाइलै भै रा छ।
नेपालमा ब्लगिङको भविष्य कस्तो छ ?
म त राम्रै देख्छु। लेख्ने र पढ्ने दुबै वर्गलाई फाईदै पुग्छ।
के ब्लगिङलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ ?
मेरो बुझाइमा ब्लगिङ अभिब्यक्ति हो । जबसम्म त्यसले अन्य ब्यक्ति वा समाजलाई हानी गर्दैन तब सम्म स्व-व्यवस्थित गर्नु नै ठीक होला। न कि सामूहिक ।
हामीले नागरिक पत्रकारिता प्रवर्धन गर्नकोलागि मेरोरिपोर्ट मार्फत प्रयास गरी रहेका छौँ । मेरोरिपोर्टको बारेमा तपाईंको के धारणा छ ?
मैले धेरै त पढ्न पाएको छैन। सर्सर्ती हेर्दा विभिन्न विषयबस्तु समेटेर राख्नुभएको रहेछ। रोचक प्रस्तुति लाग्यो।
केहि सुझाव ?
“साताको ब्लगर” स्तम्भ रोचक र नविन लाग्यो। यसले नयाँ पुराना ब्लगरहरूको भलो गर्नेछ भन्ने विश्वास छ। जारी राख्नुहोला ।
वसन्तको ब्लग: http://giri25.blogspot.com/
फेसबुक : https://www.facebook.com/chembasant
ट्वीटर ह्यन्डल : https://twitter.com/#!/Nayalahure
Comment by Sushil Kumar Karki on June 15, 2012 at 8:30pm
Comment by Indra Dhoj Kshetri on June 14, 2012 at 8:46am
Glad to see you here featured. :)
Comment by Giri Basant on June 14, 2012 at 6:58am
Thank you all!!!-Basant
Comment by Amuna Chapagain on June 13, 2012 at 3:09pm
Comment by Ananta Koirala on June 13, 2012 at 3:06pm
बधाई तथा शुभकामना !!
Comment by Ajeeta Sigdel on June 13, 2012 at 2:55pm